Hababka in dayactir Error Memory Card
Fariimaha Error kaarka Memory
Sidee inuu ka soo kabsado xogta lumay qaladka kaadhka xusuusta
Video tutorial qalad kaadhka xusuusta
Sababta oo ah khaladaadka ku jira kaarka Memory
Hababka kale ee la khaladaadka ku jira kaadhka xusuusta aad ka qaban
1 Error fariimaha kaarka Memory
The fariimaha qalad u kaadhka xusuusta kala duwanaan karaan in nooca iyo kiis oo ka mid ah waxyeelo ee macquulka ah. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah baadi fariimaha guud: khaladaadka ku jira kaadhka xusuusta; card uninitialized; Baadi kaarka; ku qor baadi baadi / akhriyo; la'aanta ah ee kaadhka xusuusta; card in aan la isticmaali Karin.
Wax kasta oo nooc ka mid ah khaladaadka ku jira kiiska kaadhka xusuusta aad lumiso xogta kaarka, waxaad iyaga ka dhigi kartaa dib u soo kabashada qalab kaadhka xusuusta . Xasuusta qalab kabashada kaarka kaa caawin kara inaad isha marisid kaadhka xusuusta macquul waxyeelo ka dibna soo kabsado xogta.
Haddii aad qabto Mac ah, waxa aad awoodi kartaa in aad isticmaasho Wondershare Photo Recovery for Mac (la jaan qaada Mavericks), kaas oo awood u inuu ka soo kabsado formatted, tirtiray, lumay iyo qaar ka mid ah alaabtii geli karin sida music, videos iyo sawiro ka kaadhka xusuusta, Mac iyo warbaahinta kale qalab lagu kaydiyo. Haddii aad computer Win ah leedahay, waxa aad awoodi kartaa in aad isticmaasho Wondershare Photo Recovery (la jaan qaada Windows 8).
Software kabashada waxay ujeedadeedu tahay in ay dib ugu heli photos, videos iyo audio files lumay ay sabab u tahay qaladaad ka dhacay kaadhka xusuusta aad. Waa ammaan iyo barnaamijka akhri kaliya. Next, aynu isku dayi version Windows ee tallaabooyinka.
2 Sidee inuu ka soo kabsado xogta lumay qaladka kaadhka xusuusta
Tallaabada 1 Connect kaadhka xusuusta aad la computer
Tallaabada 2 Dooro kaarka u scan
Dhammaan drives ama cajaladaha baari doono your computer la soo bandhigi doonaa halkan, iyo sidoo kale kaadhka xusuusta aad. Waxaa Dooro oo uu bilaabo inuu u iskaan.
Tallaabada 3 Start kabashada xogta card
Marka iskaanka ka baxayo, dhammaan xogta recoverable ay ka mid yihiin audio, video iyo sawir ku qoran yihiin warbixinta iskaanka ah. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh oo baadh kuwii aad rabto oo ka dhacay on the "Ladnaansho" in ay dib u hesho.
Markaas oo dhan kaadhka xusuusta macluumaadka khasaaraha ay sabab u tahay qalad ka dib. Ha iyaga ku badbaadin kaarka iyo dib ilaa meel ammaan ah.
3 Video tutorial qalad kaadhka xusuusta
4 Sababta oo ah khaladaadka ku jira kaarka Memory
The khaladaad kor ku xusan waxaa laga yaabaa yimaado ra`yi sababo badan. Waxaa u dhaxeysa jeermiska fayraska in qaab-dhismeedka xogta musuqmaasuq ee kaadhka xusuusta. Hoos waxaa ku qoran sababaha ugu badan:
»formatting ee kaadhka xusuusta ma si sax ah.
»nidaamka file waxaa wada baabbi'iyey ama hantida nidaamka file ee waa ceeriin
»ahayni akhristaha card
»kharimibo ama jeermiska fayraska
»Disk-dhismeedka musuqmaasuqa ee kaadhka xusuusta aad
»bixitaanka kaadhka xusuusta aad u wareegayo ma kamarada off
»Daminaaya camera inta lagu guda jiro geeddi-socodka qoraalka
No arrinta habka aad dooratid in aad qabto kor ku khaladaad, waxa ugu muhiimsan ee aad samaynaysaa waa in aan marnaba loo badbaadiyo wixii macluumaad cusub oo ku yaal si looga hortago overwriting xogta in aynu lahaa xogta aad ku waari lumay, oo ay helaan hab lagu xaliyo khaladaadka ku jira kaadhka xusuusta sida ugu dhaqsaha badan.
5 Hababka kale ee la khaladaadka ku jira kaadhka xusuusta aad ka qaban
Sida aad looga qabto noocyada kala duwan ee laga yaabo sida qaladaad ? Hadda, waxa aad awoodi kartaa in aad raacdo tutorial soo socda si wax looga qabto dhibaatada.
»Halkii arkaysid xog ku saabsan qalab aad si toos ah, aad ku xidhan karto qalabka si aad computer si ay u helaan xogta,
»edaab akhristaha kaarka si ay u helaan xogta ku saabsan your computer ama iskuday kale cable xogta.
»Haddii aad dareentid in akhristaha card isticmaalaya ku guuldareysto in ay ka shaqeeyaan, lahaa inaad si fiican u sameeyaan jeeg kaarka khaladaadka. Waxaa suurto gal ah in aad ka hesho wax qalad warbaahinta iyadoo la isticmaalayo utilities Repair digsi, sida Utility Repair Disk in nidaamka qalliinka Mac OS X iyo chkdsk ee Microsoft Windows.
»Haddii tallaabooyinka kor ku xusan ma caawin karaan in aad xal u helidda dhibaatada, waxaad yeelan doontaa ma dooran laakiin in qaab, ka dibna ay bilaabaan dib u soo kabashada kaadhka xusuusta sida ugu dhaqsaha badan.
Haddii aad sidoo kale damacsan tahay inuu ka soo kabsado files badan files audio, sawiro, videos, sida Archives, PDF files, Emails, waraaqaha Xafiiska .etc. ka qalab kale oo computer, waxaad dooran kartaa version a badan: Wondershare Data Recovery ama Wondershare Data Recovery for Mac , oo sameeya wax ka badan Photo Recovery ah.
> Resource > Memory Card > Methods si uu u xaliyo Loss Data keena Error Memory Card